I-Semalt ichaza ukuthi ungadala kanjani izincazelo ze-Meta ezikhiqiza i-Traffic E-Commerce
Kunoma yiliphi ibhizinisi, ukulanda ithrafikhi ingenye yezindlela zokufinyelela eziphakeme. Ninieqhuba ukusebenza kwe-Search Engine (SEO), amathegi we-meta nezincazelo yizindawo ezibalulekile zokubeka amagama angukhiye okuncintisana. I-e-commerce metaIzincazelo yizikhangiso ezimfushane - long term care insurance one time premium.
I-HTML meta tags inikeza iseva ulwazi oluwusizo ngekhasi lewebhu. Kukhona njaloithegi ye-meta yokuchazwa kokuqukethwe kwekhasi, umaka we-i-meta tag yokwaziswa kwe-copyright nomaka wameta wokubamba ama-robots.txt. Isibonelo,
Amathegi echaza imeta abalulekile ikakhulukazi ekukhangiseni kwezokuxhumana nabantu.Inikeza isikhuthazo sokubusa nokubaluleka uma ukwabelana ngekhasi kuvame kakhulu. Ngakho, i-SMM iyindlela eyinhloko yokulandaamaklayenti. Isiza ukuqala kokuqala ukushaya abancintisana futhi unike wonke umuntu ithuba lokubusa ezindlini zabo.
Nik Chaykovskiy, umphathi wePhasimende Impumelelo i-Semalt ichaza izici ezibalulekile okufanele uzicabangele uma udala izincazelo ze-meta.
Nini ukusebenzisa izincazelo ze-Meta
Ngesethi ethile yamagama angukhiye, incazelo ye-meta ingaba nenzuzo yokwenzaezinye izinguquko. Incazelo ye-Meta inikeza ababukeli esinye isiqiniseko mayelana nokubaluleka kokuqukethwe kwakho ngesethi enikeziwe yamagama angukhiye.Imibuzo yosesho, okubukeka efanayo idinga incazelo ye-meta yokuphula i-tie.
I-Semalt isincoma ukuthi ifaka amagama angukhiye omude wezincazelo ze-meta. Uma okuqukethwekuhilela okungaphezu kwamagama angukhiye amathathu, ungasebenzisi kuwo incazelo ye-meta..Injini yokusesha ingenza iphutha kalula ngenxa yeukugxila igama elingukhiye, okukuthi, okukuthola ifulege. Kufanele uthathe ingxenye yalolu khasi futhi usebenzise isithonjana ukuze wenze kuveleulwazi lombuzo wosesho.
Ukubhala I-E-Commerce Ehle Yezokuhweba Incazelo
Ngezinhlelo zokusebenza eziningi, ubude obuhle bokuchazwa kwe-meta yizinhlamvu ezingu-160 eziphezulu.Isibonelo, i-Google njengenkampani ine-website enezincazelo zemeta, equkethe izinhlamvu ezingu-159. Lokhu kuhlanganisa ngisho nezikhala njengezinhlamvu.
Uma wenza incazelo enhle ye-meta, kubalulekile ukucabangela njenge-tweet nomaokuthunyelwe kwe-Facebook. I-Twitter inomkhawulo wezinhlamvu ezingu-160. Ungaphinde ulandele ezinye zeziqondiso ezilandelayo:
Sebenzisa amagama angukhiye. Imishwana yokusesha ibonisa okuqukethwe, okuyinto ephakeme kulokho iumsebenzisi ucwaninga. Ukubaluleka okubangelwa ezinye zezici ezenza ukuthi i-algorithm ikubeke phezulu.
Sebenzisa izenzo. Amagama avusa umuntu ukuba athathe isinyathelo ngokushesha. Ungasebenzisainkulumo efana ne "Shop earphones ku-Jumia".
Sebenzisa ukushaya ucingo. Hlanganisa incazelo ye-meta ngezenzo ezifana "nesitolo", "landa" noma "uthenge".
Yakha izifanekiso. Kunzima kakhulu ukubhala incazelo entsha yemeta ngayinyeikhasi. Ukusebenzisa izifanekiso, ungenza kube lula.
Izincazelo ze-Meta zisiza iwebhusayithi yakho ukuba iphakame ngendlela engafanele. Abaningiabantu abahluleka ukubona ukuthi ukuthola isikhundla esiphakeme akusho ukuthi ukuchofoza. Izincazelo ze-Meta ziguqula umuntu obuka ikhasichofoza. Iqukethe imininingwane ebalulekile enengqondo emibhalweni yokucinga yesethi esinikeziwe samagama angukhiye. Zinezinye izintointo enhle, incazelo yesigrafu evulekile. Amathegi we-Meta asheshe afanele ukufaka kokuthunyelwe kwezokuxhumana. Ukubandakanyeka kwezokuxhumana komphakathi kungenye yeizindlela ze-backlink kanye nokubaluleka kungenza ngcono i-SEO ikunike izivakashi eziningi.